Global Voices teny Malagasy » #IdentityMatrix: Ireo fiteny Afrikana sy ny zo nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Aogositra 2020 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Liva Andriamanantena
Vehivavy avy amin'ny vondrona Ndebele any Afrika Atsimo. Betsaka ireo vondrona indizeny sy fiteny indizeny any Afrika Atsimo no tsy miseho an-tserasera. Sary avy amin'ny UN Photo/P Mugabane , 1 Janoary 1988. (CC BY-NC-ND 2.0 )
Ny 20 Aprily ka hatramin'ny 22 May 2020, nanatontosa resadresaka tao amin'ny Twitter ho ampahan'ny tetikasa “The identity matrix: Sehatra handrindrana ny fandrahonana fanehoan-kevitra an-tserasera eto Afrika” ny Global Voices Afrika Atsimon'i Sahara izay niarahany tamin'ny Rising Voices .
Ny Africa Digital Rights Fund  avy amin'ny Fiaraha-miasa amin'ny politikan'ny TIC Iraisampirenena ho an'i Atsinanana sy Atsimon'i Afrika (CIPESA ) no mamatsy vola ity tetikasa ity.
Vehivavy mpisoronabe ao amin'ny toerana masina any Ọ̀ṣun any atsimo andrefan'i Nizeria. Sary avy amin'i Carsten ten Brink , 15 Novambra 2018 (CC BY-NC-ND 2.0 ).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/20/149345/
 Projet « matrice d'identité » : régulation des menaces pesant sur la liberté d’expression en Afrique: https://fr.globalvoices.org/dossiers/projet-matrice-didentite-regulation-des-menaces-pesant-sur-la-liberte-dexpression-en-afrique/
 Africa Digital Rights Fund: https://cipesa.org/2019/07/inaugural-winners-of-the-africa-digital-rights-fund-announced/?fbclid=IwAR2gnc9k8HAiNY-DNOW3vJufssGgPzVlJ5AnZjL-zn8dKKXYzQ4lw9zL7ls
 Projet « matrice d'identité » : discussions autour de l'identité et des droits numériques en Afrique: https://fr.globalvoices.org/2020/04/16/248328/
 Qui se charge de déjouer la désinformation en ligne en bambara ?: https://fr.globalvoices.org/2020/06/19/252023/
 ‘Révolte linguistique’ : cet activiste tweete contre la disparition des langues autochtones en Afrique du Sud: https://fr.globalvoices.org/2020/05/06/249635/
 Améliorer la visibilité du swahili : identité, langue et Internet: https://fr.globalvoices.org/2020/07/03/251687/
 Mpikatroka ho an'ny fiteny yorùbá mitolona ho an'ny hamaroam-piteny ety anaty habaka nomerika: https://mg.globalvoices.org/2020/06/16/148513/